Mucaardka Ingiriiska oo dhaleeceyay Barnaamij uu kaqayb galay Dominic Cummings. – Geelle Magazine
Mucaardka Ingiriiska oo dhaleeceyay Barnaamij uu kaqayb galay Dominic Cummings.
Mucaardka ayaa dowlada Ingiriiska dhaleeceeyay kadib markii La-taliyaha raiisel wasaaraha Boris Johnson ee Dominic Cummings uu kaqayb galay Barnaamijka Sage kaas oo looga doodayay cudurka Corona Virus.
Dowladda ayaa sheegtay in Mr Cummings uu ka qeybgalay shirarkakaas oo looga hadlo xaaladaha deg dea ah waxana lagu falanqayanayay sidii si wanaagsan loogu fahmi lahaa doodaha sayniska ee ku saabsan fayraska corona.
Afayeenka caafimadka ee xisbiga shaqaalaha Jonathan Ashworth ayaa u sheegay barnaamijka BBC Radio 4 ee barnaamijka ayaa walaac kamuujiyay in lataliyeyaasha siyaasadeed ay ka qayb galaan barnaamijka Sage sida lataliyaha ra’siiul wasaare Boris Johnson Dominic Cummings .
Si kastaba ha noqotee agaasimaha caafimaadka qaranka Stephen Powis, oo ka mid ah xubnaha sida aadka ah loo yaqaan Barnaamijka Sage waxa uu sheegay in uu ku kalsoon yahay dooda cilmiyaysan ee ay kaqayb galayaan saynisyahanada ” waan u kalsoon yahay waxa ka dhacaya Sage, waa wadahadal cilmiyeysan oo ku lug leh saynisyahannada iyo khubarada xubnahan” ayuu yiri Stephen Powis.
Warbixin: Fatahaadi Webigga Jubba oo samaameeyay in kudhow Lix kun oo Qoys.